ပို့စ်တင်ချိန် - 10/30/2013 09:06:00 AM
အမျိုးသမီး ဆံပင်ကျွတ်တာကို ယောက်ျား-ဟော်မုန်းဆေးနဲ့ ကုရတယ်လို့ပြောရင် ကသိကအောင့်တော့နိုင်ပါမယ်။ ရောဂါနာမည်ကိုက (အင်ဒရိုဂျင်းနစ်) ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းလို့ ခေါ်တာဟာ ယောက်ျား-ဟော်မုန်းနာမည် ဖြစ်နေတာ သတိပြုပါ။
ဆရာဝန်တွေကလဲ ဟော်မုန်း-သောက်ဆေးပေးဘို့ ဝန်လေးပါတယ်။ ဆေးမသုံးခင် အင်ဒရိုဂျင် ယောက်ျား-ဟော်မုန်း များနေလို့ ဆံပင်ကျွတ်တာသေခြာစေရတယ်။ ဒါတောင်မှ လိမ်းဆေးပေးကြတာ များတယ်။ စောစောသိသူကို စောစော ဆေးလိမ်းခိုင်းတာ ပိုကောင်းတယ်။ ကြာနေတာမျိုးက ဆံပင်ဖြစ်တဲ့ အိတ်လေးတွေ အတော်များများကို ဖျက်ဆီးပြီးသားဖြစ်နေနိုင်တယ်။ တခြားလိုအပ်မဲ့ (ဗီတာမင်) နဲ့ ဓါတ်ဆားတွေပါ သောက်ဘို့ လိုသေးတယ်။ ဆေးရဲ့ ထိရောက်မှုက တယောက်နဲ့တယောက် မတူတတ်ပါ။
2. Spironolactone (Aldactone) ဆေးက ဆီးသွားစေတဲ့ဆေး၊ ဒါပေမဲ့ တခြားဆီးဆေးတွေလို (ပိုတက်စီယမ်) မနည်းစေဘူး။ ကိုယ်ရောင်တာ နဲ့ သွေးတိုးအတွက် ပေးတယ်။ Hyperaldosteronism ရောဂါမှာလဲ သုံးပါသေးတယ်။
4. Cyproterone Acetate ဆေးက ယောက်ျားတွေမှာ လိင်စိတ် ရိုင်းစိုင်းကဲလွန်း နေတာအတွက် သုံးတယ်။ ဒီဆေးကို Hirsutism ခေါ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ မျက်နှာမှာ အမွှေးများနေတာ အတွက်လဲ သုံးတယ်။
5. (အီစထိုဂျင်) နဲ့ (ပရိုဂျက်စတီရုံး) ဟော်မုန်းတွေပါတဲ့ ကိုယ်ဝန်တား စားဆေးတွေကနေ မျိုးဥအိမ်ကနေထုတ်တဲ့ ဟော်မုန်းတွေကို နည်းစေတယ်။ ဒါကြောင့် (အင်ဒရိုဂျင်) များလို့ဖြစ်ရတဲ့ ဆံပင်နည်းတာ-ပါးတာအတွက် သုံးနိုင်တယ်။ ကိုယ်ဝန်တားဘို့ရာသုံးတဲ့အခါ သတိထားစရာတွေ မသုံးသင့်တာတွေအတိုင်း သတိရှိရမယ်။
6. Ketoconazole (Nizoral) လိမ်းဆေးဟာ မှို (ဖန်းဂတ်စ်) ရောဂါအတွက်သုံးနေတာဖြစ်တယ်။ ဒီဆေးက Adrenal gland (အဒရီနယ်လ်-ဂလင်း) နဲ့ ကျား-အစိ၊ မ-မျိုးဥအိမ်တွေကနေ (တက်စတိုစတီရုံး) ဟော်မုန်း နဲ့ တခြား (အင်ဒရိုဂျင်) တွေ ထွက်မှာကို နည်းစေတယ်။ Nizoral shampoo ခေါင်းလျှော်ရည်ထဲမှာ Ketoconazole 2% ပါတယ်။
7. Finasteride (Propecia, Proscar) ဆေးက (DHT) ခေါ်တဲ့ ဆံပင်-အိတ်လေးတွေကို ဒုက္ခပေးမဲ့ (အင်ဇိုင်းမ်) ကို တားဆီးပေးတယ်။ ဆေးပေါ်ကာစတုံးက ဆီးကျိတ်ရောဂါအတွက် ဖြစ်တယ်။ Propecia 1 mg ကို ယောက်ျားတွေ ဆံပင်ပေါက်စေဘို့ သုံးနိုင်တယ်။ တချို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မဟုတ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေအတွက်လဲ သုံးနိုင်တယ်။ ယောက်ျားတွေသုံးရင် လိင်အင်္ဂါသန်မာမှုနဲ့ လိင်စိတ်တွေမှာ သတိထားရမယ်။ မိန်းမတွေမှာ အဲလိုဖြစ်တာတော့ မတွေ့ရဘူး။